“raali kama noqoneyno in hawadeena meel kale laga maamulo | Saxil News Network
“raali kama noqoneyno in hawadeena meel kale laga maamulo
Image captionMadaxweyne Farmaajo oo qaar ka mid ah shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ay u sharaxayaan sida qalabka uu u shaqeynayo
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa si adag uga diiday in “Soomaaliya ay wada maamusho hawada”.
Maareeyaha hay’adda duulista iyo madaarrada Somaliland, Cabdi Maxamed Rodol oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in Heshisyadii horey ee lagu saxiixay Turkiga ay dhigayeen in labada magaalo ee Muqdisho iyo hargeysa la geeyo qalabka maamulka hawada.
“Waxaa jiro heshiisyo hore oo la galay… waxaa qeyb ka ahaa in hawada aan wada maamulanno, qalab la geeyo Muqdisho, qalab kalena la keeno hargeysa oo la dhameystiro Desembar”.
Wuxuu sheegay in warkan ay ka maqleen telefishinnada, balse ay ahayd in wadatashi la geliyo ka hor inta aanan lagu dhawaaqin.
“Waxaa nasiib darro ah, Soomaaliya ayadoon wada tashi iyo heshiis galin, in ay keligood ku dhawaaqeen in ay hawadii oo dhan la wareegeen. Taasina waa in marnaba aysan Somaliland ka raali noqoneyn in hawadeeda meel kale laga maamulo”.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay maamulka hawada dalka oo tan iy burburkii ay gacanta ku hayeen hay’ado ajaaniib ah.
Madaxweynaha wuxuu tilmaamay, “Arrintaasi waxay ku timid shaqo iyo juhdi badan oo la geliyay. Halkan waxaan ku haystaan qalab ka casrisan midkii hawadeena lagu maamulayay ee yaalla Nairobi.”
“Markii aan fiiriyay, waxaa iicaddaatay in aan u diyaarsannahay oo keliya ma ahan aqoon ahaan ee xitaa qalab ahaan oo ka casrisannahay dalal badan oo Afrikaan ah”, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri: “Tani waa bilowga xoojinta qarannimadeena, waxaa noogu xigi doona oo aan gacanteena ku jirin maamulka baddeena, oo aysan jiri doonin cid ku soo xadgudbi karta oo khayraadkeenna maalin iyo habeen gurata. Ma jiri doonto cid istiraahda meesha lama joogo oo qashin ku shubi doonta”.
“Midnimada Soomaaliyeed waa arrin aan kulligeen ka hadalno, waana in aan xoojinaa – Iyadaa lagu gaari karaa horumar, iyadaa lagu wada shaqeyn karaa. Midnimadaas waxay ku imaaneysaa dib u heshiisiin oo aan si dhaqso ah u billaabeyno”., ayuu yiri Farmaajo